War deg deg ah Bashiir_Ahmed_Makhtal ayaa hadda ka degay dalka Canada isaga oo 12 sano dulmi ugu xidhnaa Itoobiya. | ogaden24
War deg deg ah Bashiir_Ahmed_Makhtal ayaa hadda ka degay dalka Canada isaga oo 12 sano dulmi ugu xidhnaa Itoobiya.
Apr 21, 2018 - Aragtiyood
Marka hore waxaa mahad oo dhan iska leh Allaah -swt, oo qaddaray in walaalkeen Bashiir Axmed Makhtal xorriyaddiisii dib u helay kadib 12 sano oo xabsi ah iyo xukun baadil ah oo muddadiisu ahayd “Xabsi-daa’im”. Ilaahay waxaynu waydiisan inuu innaga dhigo kuwii xilliga adag sabra ee u adkaysta imtixaanka nolosha islamarkaana xilliga farxadda Alle u mahad-naqa ee aan qooqin.
Waxaan hambalyo u dirayaa guud ahaan shacabka soomaaliyeed, Shacabka Soomaaligalbeed/Ogaadeeniya iyo dhammaan bahda halganka Soomaaligalbeed.
Waxaan si gaar ah hambalyadan farxadda ula wadaagayaa laba Qoys oo runtii nagu qaali ah, inta taariikhdeennu jirtana magacoodu jiridoono – Insha allaah, waa reer Garaad Makhtal iyo reer Sheekh Ibraahim Cabdalla oo xadhigga Bashiir Makhtal si gaar ah u taabtay.
Lays kuma jiree Afar (4) ruux waa inaan mid mid ugu hambalyeeyo:
1. Bashiir Hooyadii, Faadumo Cabdi Samad oo maanta waayeel ah, hooyo Faadumo majiro wax uga qaalisan inay maanta maqasho wiilkeedii Bashiir oo xorriyaddiisii dib u helay, inkastooy duruuf adag oo adag ku xeeran tahay haddana waxaan leeyahay hooyo Faadumo HAMBALYO!.
2. Bashiir Afadiisa, Marwo Caziiza Sheekh Ibraahim oo runtii iyadoo Aroos farxadeed ku jirtay ilaahay qadaray inay la kulanto Imtixaan wayn laakiin sabar iyo adkaysi lagu ladhay gobanimo kaga soo gudubtay imtixaankii, waxaan leeyahay Marwo Caziiza HAMBALYO!.
3. Gabadha uu Abtiga u yahay, waa qof aan qof loo dhigaa jirin, waa walaasheen Basra sheekh Badri oo muddaddii 12ka sano ahayd ee uu Bashiir xidhnaa ku dul xidhnayn oon hal maalin ah danteeda u bixin, Basra waxaan ku leeyahay ilaahay haku darajeeyo labada daaroodba, walaal Basra waxaan leeyahay HAMBALYO!.
4. Bashiir inaadeerkii, Siciid Cabdi Makhtal oo runtii Halgan mara-xoornimo ah iyo dadaal qayru-caadi ugalay sidii uu Bashiir xabsiga uga soo saari lahaa. dhammaantood waxaan leeyahay HAMBALYO, HAMBALYO.
Intaa waxaan ku darayaa Bashiir farxaddiisu waa qabyo, labada qoys ee reer Makhtal daahir iyo reer Sheekh Ibraahim farxadoodu waa qabyo, bahda halganka iyo guud ahaan shacabkeenna dulman farxadoodu waa qabyo laba sababood dartood:
1. Dadkeennii waxay ku jiraan xilli adag oo adag, gumaad, gunnimo, silic iyo foolxumo ayey la nool-yihiin.
2. kumanaan maxaabiis ah oo madax halgan iyo dad caadi ah isugu jira ayaa dhooban Xabsiyada laga billaabo Addis ababa ilaa Fayr-fayr.